Ny Fiantraikan’ny Tambajotra Sosialy Amin’ireo Fifidianana Savaranonando Taona 2016 Ao Nizera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Marsa 2016 13:41 GMT
sarin'ireo kandidà rehetra ho amin'ny toerana ambony ao Niger – avy amin'ny mpanoratra
Natao tamin'ny 21 febroary 2016 teo ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana savaranonando tao Nizeria. Hatao ny faha-20 martsa ny fihodinana faharoa, mba hahafahana hifidy ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena.
Ao Nizera, raha momba ny fifidianana ho filoha dia fifidianana anaran'olon-tokana anatina fihodinana roa no atao. Voafidy ny kandidà izay mahazo vato maherin'ny 50%. Raha tsy izany indray, mifanandrina amin'ny fihodinana faharoa ireo kandidà mahazo vato betsaka, telo herinandro aty aoriana. Izay mandresy amin'ny fihodinana faharoa no lasa filoham-pirenena.
Nibodo toerana nandritra ny 5 taona ny filoham-pirenena niala, Issoufou Mahamadou, 63 taona. Araka ireo valim-pifidianana navoakan'ny Commission électorale nationale indépendante (CENI) io zoma 26 febroary io, voalaza fa nanakaiky ny 48,41% ny vatony, izay manery azy hiatrika ny mpifanandrina aminy amin'ny fihodinana faharoa, Hama Amadou, izay nahazo vato miisa 17,41%. Efa niampanga sahady ny fitondrana ho nanao hosoka ny mpanohitra sady nanambara fa tsy hankato ireo valiny ireo. Saingy tsy ny mpanohitra irery ihany no nitsikera io komisiona io: maro ireo mpanara-maso no nametraka fanontaniana momba ny fiasan'ny CENI. Na dia ny tao anatin'izay azo antoka fa ho maro an'isa aza dia nahatsikaritra fa nomanina tao anaty hamehana nilay fitsampankevitra, miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny biraom-pifidianana voatendry sy nofanina tamin'ny minitra farany.
Toy ny hoe tena mavesatra loatra eo antsorok'ireo tomponandraikitra io iraka io
hoy ny nambaran'ny mpikambana iray ao amin'ny governemanta. I Hama Amadou sy i Issoufou izany no hifanandrina amin'ny fihodinana faharoa, ka ny talata 8 martsa 2016 aorian'ny misasakalina no hisokatra ny fampielezankevitra ary hifarana ny zoma 18 martsa 2016 misasakalina.
Sarintany misy ny valin'ireo fifidianana fihodinana voalohany tao Niger, avy amin'i G. Luton
Tena mampahery ny fampiasàn'ireo tanora Nizeriana ny tambajotra sosialy nandritra ireo fifidianana. Teny anatin'ireo karazana adihevitra mikasika ny fizotry ny fifidianana, ireo tanora sy ireo mpomba ireo kandidà ary ireo vondrona politika samihafa, dia naneho hevitra mba hanomezany vaovao mikasika ny heviny momba ireo fifidianana, tamin'ny alàlan'ny Facebook, Twitter ary Whatsapp, mba hahafahana manaparitaka mora foana ireo vaovao avy amin'ny lafivalon'ny firenena.
Andrasana araka izany ny hanarahana mivantana ny fizotry ny latsabato any amin'ireo faritra maro isan-karazany manerana ny firenena ary indrindra indrindra ny famoahana ireo valiny avy amin'ireo media sosialy. Tsy voasarika amin'ireo onjam-peo na fahitalavitra intsony ireo tanora satria ny smartphone dia ampy hanarahana mivantana. Rehefa izany, taterina amin'ny twitter miaraka amin'ireo tenifototra: #‎présidentielles‬ ‪‪#team223 ‪#‎jevote‬ ‬‪#‎jevote‬ ‪#‎pour‬la‬‎stabilité‬ #Takara2016 #NigerVote #niger, ny valin'izay rehetra miseho manerana ny firenena.
Sambany tamin'ny tantaran'ny demokrasia teo amin'ny firenena, no nitàna toerana lehibe teo amin'ny fampielezankevitra nataon'ireo kandidà sy ireo antoko politika isan-karazany, ireo tambajotra sosialy. Ho an'ireo mpanao gazety sy ireo olon'ny media, tena loharanom-baovao tanteraka mihitsy ireo karazana famoaham-baovao ireo. Nahafahana nanao adihevitra avo lenta ireo karazana serasera vaovao, nandresy lahatra ary nanangonana antontan-kevitra avy amin'ireo nizeriana samihafa fihaviana etsy andaniny, ary etsy ankilany kosa manoloana ireo mpifanandrina ara-politika. Nahafahan'ireo mpitondra antsika ihany koa hanana topimaso amin'izay eritreretin'ny fampahalalam-baovao eran-tany manokana mikasika ireo fifidianana ireo. Azo marihana farany koa fa ireo tambajotra sosialy ireo dia ahafahan'ireo mpanapa-kevitra eto amintsika, izay efa tena hita mazàna ao amin'ny tambajotra sosialy, mba ho afaka hanentana momba izay andrasan'ireo andian-taranaka tonga saina miahiahy ary, raha azo atao koa, dia mamaly uireny zavatra andrasana ireny dieny rehefa eo amin'ny fitondrana.
Farany, zava-dehibe no manamarika fa niadiana hevitra betsaka tao amin'ireo tambajotra sosialy ireo ihany koa ireo olana tena manan-danja ao Niger izay ireto avy: hosoka amin'ny fifidianana, korontana amin'ny fiainam-bahoaka, ny kolikoly, ireo fanodikondinam-bolam-bahoaka, ny tsy fisian'ny asa, ary ireo olan'ny tsy fandriamampahalemana manoloana ny fandrahonana ataon'ny vondrona Boko Haram.
Moldavia: Miandry olona hafa mpametraka mpitondra ?